विदेश उड्न ठिक्क परेर विमानस्थल पुगेका डेढ सय यात्रु घर फर्किनु पर्दा…. - Onlines Time
August 11, 2021 onlinestimeLeaveaComment on विदेश उड्न ठिक्क परेर विमानस्थल पुगेका डेढ सय यात्रु घर फर्किनु पर्दा….
महामारीलाई देखाएर विभिन्न मुलुकले लागु गरेको आआफ्नै नियमका कारण नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान समस्या खेप्दै आएका छन्। पछिल्लो समय संयुक्त अरब इमिरेटस् ९युएई० ले लागु गरेको नयाँ नियमका कारण सोमबार डेढ सय यात्रु दुबई जानबाट रोकिए।
युएई सरकारले जहाजको बोर्डिड पास लिनुभन्दा अघि विमानस्थलमा नै एन्टिजेन परीक्षण गरेकालाई मात्र आफ्नो मुलुकमा आउन दिने नियम लागु गरेको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एन्टिजेन परीक्षणको सुविधा नभएकाले दुबई जान लागेका डेढ सय यात्रु रोकिएका हुन्। यी यात्रुमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै रोजगारीका लागि दुबई जाने युवा थिए।
नेपालबाट दुबई उड्ने यात्रुको हकमा ४८ घण्टाभित्र गरिएको परीक्षण पिसिआरको रिपोर्ट र चार घण्टापहिले विमानस्थलमै गरिएको एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरेपछि हिमालय एयरलाइन्सका र नेपाल वायुसेवा निगमका ६० जना यात्रु उड्न नपाएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।
युएई सरकारले पछिल्लो समय संक्रमण बढेका संसारका १६ मुलुकलाई जोखिमको सूचीमा राखेको छ। यही सूचीमा रहेका मुलुकबाट आउनेहरूका लागि नयाँ नियम लागु गरिएको हो। नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, नाइजेरिया, श्रीलंका र युगान्डालाई अति जोखिम भएका देशको सूचीमा राखिएको छ। यो नयाँ नियमका कारण नेपालबाट दुबईमा हुने उडान अनिश्चित बनेको छ। दुबईबाट नेपालमा हुने उडान भने यथावत् छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
म के’टि लिएर आउँछु नरिसा है भन्दै श्री’मानले आँखै अगाडि अर्कै युव’तीसंग सम्बन्ध राखे (हेर्नुस् भिडियो)
द’माई दाईले क्षेत्रीकि छोरी बि’हे गरे, ससुरालीले खड्का बनाइदिए , १८ लाख लिएर श्री’मती बेप’त्ताको आ’रोप (भिडियो हेर्नुहोस)
निर्मलाको न्या’यको लागी आधारातमा दिप प्रजलन,सपनाले थाम्न सकिनन आशु sapana roka
January 29, 2021 February 14, 2021 onlinestime